Gịnị bụ akụ mmiri ígwé na kedu ka esi akpụ ya? Netwọk Mgbasa Ozi
E nwere ụdị mmiri ozuzo dị iche iche nwere ike ịda na nke ọ bụla nwere njirimara pụrụ iche. Anyị enyochaworị ụfọdụ dị ka nieve na sleet. Taa, anyị ga-ekwu maka ya toonụ. N'ezie, ihe karịrị otu ugboro oké ifufe tụrụ gị n'anya n'oge na-adịghị anya. Ndị a bụ obere bọọlụ ice na-ada ike, na-emebi obodo na ihe ọkụkụ ma na-adịkarị obere oge.
Want chọrọ ịma ka esi esi nwee akụ mmiri igwe na ihe ndị ọ na-arụpụta? Anyị ga-akọwara gị ya n'uju.
1 Gịnị bụ akụ mmiri ígwé
3 Usoro ntughari na mmiri ozuzo
4 Hadị mmiri mmiri dị iche iche
Gịnị bụ akụ mmiri ígwé
Ọ bụrụ n’ị hụla akụ mmiri igwe, ị hụla na ọ bụ obere akụ mmiri ígwé nke na-ada n’ụdị ebe a na-awụ mmiri. Ọ na-emekarị n'oge ọ bụla n'afọ ma daa n'ike. Dabere n’otú akụ mmiri igwe ndị a hà, mbibi ha ka ukwuu ma ọ bụ pere mpe. Ngwurugwu ndị a ma ọ bụ bọọlụ ice nwere ụdị mmiri ozuzo siri ike n'ihi ịdị adị nke ọnọdụ ikuku dị iche iche na anyị ga-ahụ n'ihu.
Ha bụ mpekere ice zuru oke nke si na mbara igwe da. N'ọnọdụ ụfọdụ, achọtala ịdị adị nnukwu bọọlụ ice, nke ha kpọrọ aerolite. Otú ọ dị, nke a anaghị abanye n’isiokwu a, ebe ọ bụ na ịdị adị ya enweghị obi abụọ na ọ nwere ike ịbụ ihe na-esi na ya apụta karịa ịkpa ọchị karịa ọnọdụ ihu igwe.
Mmiri nke friji na mmiri mmiri ahụ na-agbaze obere oge mgbe ọ daa n'ala. Ma ọ bụ n'ihi ọnọdụ ihu igwe ma ọ bụ n'ihi otiti ahụ n'onwe ya. Ime ihe ike nke bọọlụ ice ndị a dara ọtụtụ windo windo, windo ụgbọala, na-emetụta ndị mmadụ na mmebi nke ihe ubi. Akụ́ mmiri igwe ahụ na ihe egwu dị na ya na-adaberekwa n'ike ike ya na oge ọ dara. E nwere oge mgbe akụ́ mmiri igwe anaghị ada n'ike, mana ọ dịka ihe ịtụnanya. N'oge ndị a, ọ dịghị emerụ ahụ.
Ugbu a anyị ga-enyocha etu esi akpụ akpụ mmiri wee wee nwee ike mee bọọlụ ice ndị a n’igwe ojii. Oké ifufe na-esokarị ifufe. Thegwé ojii dị mkpa maka nhazi nke akụ́ mmiri igwe bụ igwe ojii cumulonimbus. Igwe ojii a na-etolite n'ikuku site n'ikuku na-ekpo ọkụ nke na-esi n'elu ala na-eto. Ọ bụrụ na ikuku oyi nke na-agba n’elu igwe na-ezute igwe ọzọ nke ikuku ọkụ, ọ ga-eme ka ọ gbagote n’ihi na ọ pere mpe. Ọ bụrụ na nrịgogo ahụ kwụ ọtọ, nnukwu igwe ojii cumulonimbus ga-etolite.
Cumulonimbus ígwé ojii kwa a maara ha dị ka igwe ojii mmiri ozuzo ma ọ bụ igwe ojii. Mgbe ikuku ikuku na-ebili n'ịdị elu, ọ na-abanye na dobe na okpomọkụ n'ihi gradient gburugburu ebe obibi. Dị ka anyị si mara, okpomọkụ na-amalite ibelata ogologo dị ka ikuku ikuku. Ozugbo ọ rutere ebe ọnọdụ okpomọkụ dị n'okpuru ogo ogo, ọ na-amalite ịbanye n'ime obere ụmụ irighiri mmiri nke na-etolite igwe ojii.
Ọ bụrụ na ígwé ojii ahụ kwụwa ọtọ, ọ ga-ekwe omume ịchekwa ọtụtụ ihe ndị a, na-eme ka ikuku ghara ịdị na mbara igwe, nke ga-eme ka ebili mmiri kwụsị. Mgbe okpomọkụ dị n'ime igwe ojii dị oke ala, ọ bụghị naanị ụmụ irighiri mmiri ka a na-emepụta, kama, mmiri ice tụbara. Maka nke a iji mepụta, achọrọ ka a na-emepụta hygroscopic condensation nuclei, dị ka oke ntụ, foduru nke ájá, ihe na-emetọ ma ọ bụ gas ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ ice bọọlụ karịrị karịa ịdị elu nke ikuku na-ebili, ọ ga-ejedebe na-eme ihe ike n'ike n'okpuru ogo ya.
Usoro ntughari na mmiri ozuzo
Ihe mmiri ji nwayọọ nwayọọ na-ezo n'ígwé ojii. Ọ nwere ike ịnọgide na-ese n'elu mmiri ebe enwere ikuku ikuku dị elu nke na-akwali elu na nke ahụ na-aga n'ihu na-etolite igwe ojii na-emepe emepe ka ikuku na-ekpo ọkụ na-ezukọ na oyi ma na-agbanye. Nke a bụ ka igwe ojii na-eto ma na-ebuwanye ibu. Mgbe akụ mmiri igwe ahụ dị oke oke iji merie nguzogide nke Updraft, ọ na-akwụsị ọdịda.
Zọ ọzọ nke akụ mmiri igwe dị bụ maka mmelite ga-akwụsịlata ma ghara iguzogide ka ọ na-ese n’elu igwe ojii. Akụ́ mmiri ígwé na-adị arọ nke ukwuu ma ọ daba na ihe tọgbọrọ nkịtị ọ na-enweta ike ọbụna karị ruo mgbe ọ ruru n'ala. Dabere na ọnụọgụ nke bọọlụ ice nwere ike ịmalite n'igwe ojii, anyị ga-ahụ oke mmiri ozuzo na-adịgide adịgide ma na-adịgide adịgide ma ọ bụ obere.
Hadị mmiri mmiri dị iche iche
Enwere ọdịiche dị n'etiti nha bọọlụ mpi mmiri. Fọdụ dị obere ma nwee ike ịkwaga igwe ojii. Ka a na-akpụpụtakwu ma ọ bụ na-eme ka okpomọkụ na-ebelata, akpụrụ na-eto, ka ụmụ irighiri mmiri na-abịaru oghere odide ahụ. Enwere akụ́ mmiri igwe nwere ike ịtụ ọtụtụ sentimita na dayameta ma bụrụ ndị mbụ na-ada. Yabụ, mgbe ọ bụla, mgbe akụ mmiri igwe malitere, ọ bụ mgbe anyị hụrụ oke mmiri igwe kachasị elu na ọ bụ ha na-akwanye anyị nsogbu. Ka mmiri mmiri mmiri na-aga n'ihu, nha na-ebelata.
N'etiti mmebi edekọtara edetu anyị na-ahụ nnukwu ọdachi dakwasịrị na obodo India nke Moradabad na 1888. E ji ice ice zuru oke mee oke ifufe a nke kpatara ọnwụ mmadụ 246 site na mmetụta kpọmkwem n'isi ya. Fọdụ nwụrụ n ’ebe ndị ọzọ nwụrụ site n’ nnukwu mmerụ ahụ ha kpatara.
N’afọ 2010 ka edere bọlbụ kachasị ruo ugbu a na kilogram 4,4. Akụ́ mmiri ígwé a mere na Viale, Argentina. Ihe kachasị mma bụ na akụ mmiri mmiri nwere nsonaazụ na-adịghị mma na kụrụ, n'ihi mbibi nke epupụta okooko osisi n'ihi nsonaazụ ya. N'aka nke ọzọ, dabere na nha ya, ọ nwere ike ibibi windscreen nke ugbo ala na ụfọdụ akụrụngwa. Ihe niile dabere na ogo na nha ya.
Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere akụ mmiri igwe na otu esi akpụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Toonụ